Kutanga mhedziso yekuita kweiyo Goridhe Tenzi weIOS 11 | IPhone nhau
Kutanga mhedzisiro yekuita kweiyo Goridhe Tenzi weIOS 11
Miguel Hernandez | | iOS 11
Mushure mezuro Keynote, uye zvingave sei zvisina kudaro, iyo Golden Master vhezheni yeIOS 11 yakaburitswa kune vese vashandisi vanga vachishandisa iyo IOS 11 beta. Sezvanga zvichitarisirwa, iyi vhezheni yeIOS 11 inofanirwa kunge yakafanana iyo ichazopihwa kupera kwaGunyana senge yepamutemo vhezheni, zvekuti manotsi ekuvandudza haana kutaura nezve "Beta".
Isu tanga tichinyatsopuruzira Goridhe Tenzi weIOS 11 uye ichi ndicho chiitiko chedu mukushandisa bhatiri, zviputi uye mashandiro mune zvese. Semazuva ese, muActualidad iPhone tinokuunzira ongororo yakanyanya yeApple software.
Iyi vhezheni yeIOS 11 ndiyo 15A372, Vazhinji vanoratidza kuti maererano nekodhi yakafanana neizvo Apple yakatipa neBeta yegumi yeIOS 11, uye chokwadi ndechekuti takawana hunyanzvi mune izvi. Performance nekuchenjera, iyo system inoshanda sekutarisirwa kubva padyo-yekupedzisira vhezheni, zvisinei, zvimwe zvichiri kuoneka njanji zvinoenderana neshanduko, kunyanya kana isu tichishanda pane chechitatu-bato kunyorera. Chinhu chatinotarisira kuti chichagadziriswa nekufamba kwemazuva.
Zvichakadaro, YouTube iri kuramba ichipa zvakanyanya kushandisa bhatiri. Imwe tsananguro inoita senge inodya bhatiri rakawandisa ndiyo tsika yekupenya kwakakwirira, zvinoita sekunge zvakakosha kugadzirisa iyo yekupenya sensor nguva pfupi yapfuura mushure mekuisa iOS 11 GM, dambudziko raive richidhonza kubva kubvira yekutanga Betas. Kuti tiongorore zvakanyatsoita, takaenderera kudzoreredza mudziyo neiyo iOS 11 GM .IPSW, uye mhedzisiro pabhatiri yaive maawa mashanu nemaminitsi makumi maviri nemashanu ekushandiswa, iine 5h nemaminitsi makumi matatu nemashanu ekumira nguva, kushandiswa kwakanyanyisa mukati maaiziva kuyera, kunyangwe bhatiri iro richiri kungofanira kuwedzera ingangoita 1 awa rekushandisa mune ramangwana shanduro.
Kana zviri zvembugs, matambudziko ekhibhodi anoramba ari mumaapplication akaita seWhatsApp uye kudimburwa zvichienderana nebasa ripi. Kune vamwe vese, iwo matambudziko anozogadziriswa nekupfuura kwekuvandudzwa nevagadziri. Tinogona kutaura kuti iOS 11 GM iri inoshanda zvizere vhezheni ye iPhone yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kutanga mhedzisiro yekuita kweiyo Goridhe Tenzi weIOS 11
Ini ndanga ndichitarisira kuti iyo inogumbura icon iyo inosvika pakati pechidzitiro paunoshandura vhoriyamu kumusoro uye pasi ingadai yakanyangarika, asi zvakadaro haina kumanikidza kuoneka.
Mukuratidzira kuti vakatiisa imwe nguva yapfuura yezvinhu zvitsva zveIOS 11 iyo yaive imwe yezvinyorwa zvitsva zvandaifarira zvakanyanya, izvo zvakachinja chiratidzo chebhawa kumusoro kwechiso.
Pane chero munhu anoziva chero chinhu pamusoro penyaya iyi?
Ndingaite sei kuwanda ndisina kudzvanya bhatani repamba? pane ekare mamodheru 'iphone' 7 nezvimwe .. ??
Kusveta kumusoro chete inodzora nzvimbo inobuda.
Imwe yeanonyanya kushandiswa 3d touhc sarudzo yakatakurwa.
Pane chero munhu anoziva kana ichigoneswa kana ichave chete yeiyo iphone X?
Iwe unofanirwa kumanikidza kubva kumucheto wekuruboshwe kwechidzitiro uchienda pakati
Kugadzira TOUCH ID yakanzwa
Ndinovimba zvinoshanda kwauri!
Mhoroi, izvo hazvishande zvekare mu ios11, ndosaka ndanga ndichikumbira.
Mhoroi, ndanga ndichida kugadzirisa nyaya mbiri dzandisingafarire zvachose nezve iOS 11. Ini handitombowana nhaurirano dzinojekesa imwe nyaya kana zvikonzero nei sarudzo dzandiri kuzofumura dzakashandurwa.
Yekutanga yaizove iyo landscape keyboard, pane yangu iPhone 6s uye pane yangu mukadzi iPhone 7 Plus, iwe unoona maviri mativi grey mitsetse panzvimbo ye "yekuwedzera" makiyi atinakidzwa kare, ndiko kuti, iwe haugone kuwana kana kuteedzera, kunama, nzira miseve ... Nezvimwewo.
Mubvunzo wechipiri ndewe ma "Wi-Fi" uye "Bluetooth" mawairesi, iwo haagone kumiswa kubva kune nyowani Control Center! Izvo zvinopera chete nekubatana kwazvino asi mumasetingi ivo vachiri.
Ndinoda kuziva kana paine chero munhu ane ruzivo, kana kana vachikunetsa seni, idzi shanduko. Kwaziso.
Wataura chokwadi! Nezve wifi uye bluetooth, hazvina musoro kuti havadzime zvachose.
Luis O akadaro
Handifarire kuti iyo BT icon iri nguva dzese senge yakabatana nechimwe chinhu. Pamberi, iwe waiziva kana iwe wakabatanidzwa nekuti kana kwete iyo icon yakasimbiswa. Iyo bhatiri ichiri kushandisa yakawanda ichienzaniswa ne10.3.3. Ini ndakazvisunungura uye zviri kundipa matambudziko ekuisa iyo iCloud backup. Ndinowana chitupa chisiri changu. Zvakaitika kune mumwe munhu here?
Zvisinei, ndaifanira kunge ndakanyarara.
Pindura Luis O
Disney haizopa ayo 4k mafirimu kuburikidza iTunes
Iyo iPhone 7 Jet Nhema yakachipa kutenga kupfuura nakare kose